Isaias Afwerki: Nidaamka Federaalka ee qabiilka ku saleysan burbur ayuu horseedaa | Xaysimo
Home War Isaias Afwerki: Nidaamka Federaalka ee qabiilka ku saleysan burbur ayuu horseedaa
Isaias Afwerki: Nidaamka Federaalka ee qabiilka ku saleysan burbur ayuu horseedaa
Sii deynti uu Abiy Axmed ku sii daayey macabiista siyaasadeed ee fallaagada TPLF uuna ku sheegay inuu uga gol leeyahay dib u heshiisiin qaran inuu u gogol xaaro, waxaa sida oo kale Isaayaas laga filayey inuu isna sii daayo macabiista siyaasadeed ee ugu xiran.
Wuxuuna sheegay TPLF inuu Eritrea ay ku soo rideen gantaallo ayna qorsheynayeen 100 bartilmaameed ee dalkaasi ku yaalla iney duqeeyaan. Dagaalka Tigraay waxa ay uga qayb qateenna ay ahayd iney isdifaacaan oo keli ah.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee caalamiga ah waxay ciidamada Eritrea ee ka qayb qaatay dagaalka gobolka Tigraay u soo jeediyeen eedeymo ku saabsan iney geysteen fal dambiyeedyo noqon kara dambiyo dagaal sida dil, kufsi iyo xadgudubyo kale oo xuquuqda aadanaha la xiriira. Inkasta oo Eritrea ay eedeymahaasi gaashaana ku dhufatay.
Taasoo keentay iney dalal badan ay Asmara cadaadis ku saaraan iney ciidamadeedu kala baxdo gobolka Tigraay.
Afawarqiii oo hadalkiisa sii wata waxaa u sheegay talisyadi dalka Itoobya isaga dambeeyey sida Boqor Xaylasillaase, Mangista iyo Dowladdi u dambeeysay ee TPLF/EPRDF. Dhibaka shacabka Eritrea lagu hayana uu soo socday 80 sano. Hase yeeshee qalalaasaha Itoobiya ka taagan uu dalkiisu indhaha ka qabsaneyn.